गुगल अनुवाद सटीक छ? – Vocre
गुगल अनुवाद सटीक छ?
अनुवाद अनुप्रयोग र सफ्टवेयर अतीत मा एक लामो बाटो आउनुभएको छ 10 वर्षहरु. तर कसरी सही Google अनुवाद र अन्य मुक्त अनुप्रयोगहरु छन्? पत्ता लगाउनुहोस् कुन एप्स तपाइँ कोशिश गर्नु पर्छ र जुन तपाइँ लाई पास गर्नु पर्छ.
आजभोलि, तपाईलाई कुनै नयाँ देशमा जानु भन्दा पहिले पूरै नयाँ भाषा सिक्नुपर्दैन. केवल एक निःशुल्क वा भुक्तान अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईं स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ. तर जस्तै अनुप्रयोगहरू गुगल अनुवाद् सही? जब यो सटीकतामा आउँदछ, शीर्ष नि: शुल्क अनुप्रयोग सँधै शीर्षमा श्रेणीमा हुँदैन 10.
अनुवाद अनुप्रयोगहरू र सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै
अनुवाद अनुप्रयोगहरू र सफ्टवेयर सबै एक प्रमुख दोषका साथ आउँदछन्: तिनीहरू मानव होइनन्. अनुवाद अनुप्रयोगले हामी जस्तो गरे जस्तो कुरा गर्न सिक्न सक्तैन (हाम्रो मानव त्रुटि र बारीक सबै को साथ), हामी प्रविधि संग धैर्य हुनु पर्छ.
नुनको अन्नको साथ नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू लिनुहोस्
हो, सित्तैमा नि: शुल्क छ. यो खराब छैन, तर यो पनि क्रेम डे ला क्रेम हुन गइरहेको छैन. यदि तपाईंलाई एक अनुप्रयोग चाहिन्छ कि आवाज मान्यता र उपद्रव प्रदान गर्दछ, तपाईलाई एक महिना को लागी केहि डलर भुक्तान गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईलाई सित्तैमा भन्दा केहि अलि अगाडि बढ्छ.
तपाईंको आफ्नै व्याकरण र हिज्जे जाँच गर्नुहोस्
जब सम्म तपाईं भुक्तान अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहनु भएको छैन, तपाईं आफ्नो व्याकरण र हिज्जे जाँच्न सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ, विशेष गरी hmonyms को लागि (शब्दहरू उस्तै जुन लाग्छ तर भिन्न हिज्जे हुन्छ). तपाईं होमपोन्सको साथ रचनात्मक हुन चाहानुहुन्छ. यदि तपाइँ टाइप गर्नुहोस् र मकैको कान,"तपाइँ तपाइँको वाक्य को लागी सीधा अनुवाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न.
आवाज पहिचानको साथ धैर्य गर्नुहोस्
यदि तपाईं सँग अनुवाद अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने आवाज मान्यता, धैर्यवान हुनुहोस् (खास गरी सित्तैंमा). एक नि: शुल्क आवाज मान्यता अनुवाद अनुप्रयोग को प्रयोग गरी धेरै महसुस गर्न सक्छ जस्तै कसैलाई DMV मा फोनमा ग्राहक सेवा देखि प्राप्त गर्न को लागी.
के गुगल अनुवाद प्रत्यक्ष अनुवादका लागि अचूक छ?
जब यो सीधा अनुवाद गर्न आउँछ, शुद्धता Google को मजबूत सूट होईन. गुगलले इन्टरनेटबाट यसको अनुवाद लिन्छ, त्यसैले त्रुटि को लागी धेरै मार्जिन छ. तपाईंले गुगलको क्षमतालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ (वा बरु असक्षमता) उपद्रव र उपहास बुझ्न.
तपाईले खोज्नु भएको अनुवाद तपाईले पाउन सक्नुहुन्न यदि तपाई भाषणको फिगरको पछाडिको अर्थ खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने. धेरै संस्कृतिहरूको उस्तै उस्तै कुराहरू छन्, तर “हेरिएको भाँडा कहिल्यै उम्लदैन,"धेरै भाषाहरूमा बिल्कुलै फरक अनुवाद हुनेछ.
गुगल अनुवादमा डाउनसाइडहरू
धेरै नि: शुल्क भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू, गुगल अनुवाद् केहि डाउनसाइडहरू छन्. केहि सब भन्दा सामान्य शामेल:
अफलाइन प्रयोग गर्न सँधै सजिलो हुँदैन
प्रस्गले राम्रो अनुवाद गर्दैन
त्रुटि रिपोर्ट गर्न गाह्रो
कम-सामान्य भाषाहरू सहि छैनन्
व्याकरण त्रुटिहरूको साथ प्रतिलिपि गर्ने र टाँस्ने कठिन हो
अशुद्धि को उच्च संभावनाहरु
यसलाई आफ्नै लागि प्रयास गर्नुहोस्. केही प्रविष्ट गर्नुहोस् साझा स्प्यानिश वाक्यांश वा साझा चिनियाँ वाक्यांश र अन्य अनुवाद अनुप्रयोगहरू विरुद्ध जाँच गर्नुहोस् (वा हाम्रो लेखहरूमा अनुवाद).
अनुवाद अनुप्रयोगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये एक यो अफलाइन प्रयोग गर्ने क्षमता हो — वा बरु जब तपाइँ इन्टरनेट पहुँच छैन.
जब तपाईं विदेश भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि स्पष्ट 5G पहुँचमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्न. तपाईंले डाटा योजनाको लागि पनि भुक्तान गर्न आवश्यक पर्दछ. यसको मतलव तपाईलाई अनुवाद अनुप्रयोग चाहिन्छ जुन अफलाइन काम गर्दछ — केहि गुगल अझै सम्म सिद्ध छैन.
प्रस Translation्ग अनुवाद
जब यो अनुवाद गर्न आउँछ, प्रसंग सबै कुरा हो. गुगल ट्रान्सलेसनले तपाईंलाई शब्द-फर-वर्ड ट्रान्सलेसन दिन्छ प्रसंगको साथ एक भन्दा बढी. यदि तपाइँ "जहाँ बाथरूम छ प्लग इन?"गुगलको मा अंग्रेजीबाट फारसी अनुवादक, तपाईं नुहाउने कोठाको सट्टा एक शौचालयको साथ हुनु पर्छ.
गुगलको उत्पादनहरूको निःशुल्क सुइटको सम्बन्धमा ग्राहकहरूको सबै भन्दा ठूलो उजूरी भनेको यो हो कि त्रुटिहरू रिपोर्ट गर्न वास्तवमै गाह्रो हुन्छ. यदि तपाईंले अनुवादमा त्रुटि भेट्टाउनुभयो भने, तपाईले गर्न सक्ने सबै त्रुटिको रिपोर्ट गर्नु हो र आशा छ कि कसैले यसलाई फिक्स गर्यो. यो वर्ष. वा हुनसक्छ अर्को वर्ष.
कम सामान्य भाषाहरु
गुगलसँग अहिले पनि कम-ज्ञात भाषाहरूमा धेरै डाटा छैन. यदि तपाईंलाई अंग्रेजीको लागि अनुवाद आवश्यक छ, स्पेनिश वा फ्रेन्च, गुगल प्रयोग गरेर तपाई धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ (यद्यपि, अनुवाद अनुप्रयोगलाई क्यानेडाली फ्रान्सेली र फ्रान्सेली फ्रेन्च वा दक्षिण अमेरिकी स्पेनिश र मेक्सिकन स्पेनिश बीच भिन्नता गर्न कठिनाई छ). भन्न चाहन्छौं नमस्कार अन्य भाषाहरूमा पंजाबी जस्तै? आवश्यक छ मलायबाट अंग्रेजी अनुवाद? Fugged बारे मा.
नक्कल र टाँस्न सावधान रहनुहोस्
यदि तपाईंले हिज्जे त्रुटि गर्नुभयो भने (वा अरु कसैसँग छ), गुगलले अनुवाद अनुप्रयोगमा यसलाई ठीक पार्ने आशा नगर्नुहोस्. तपाईंले टाईप सुरु गर्नु अघि तपाईंको हिज्जे जाँच गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाइँ एक शब्द हिज्जे कसरी थाहा छैन, अगाडि जानुहोस् र गुगल हिज्जे पहिले.
गुगल ट्रान्सलेसन केवल एक सशुल्क अनुप्रयोगको खोज परिणाम भन्दा अशुद्धताको उच्च मौकाको लागि परिचित छ. यो सायद अचम्म लाग्दो कुरा होइन कि नि: शुल्क अनुवाद सफ्टवेयर त्रुटि बिना नै हो, तर यो उल्लेख लायक छ.
यदि तपाईं एक सशुल्क अनुप्रयोग जाँच गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं सित्तैमा भन्दा अलि बढी प्राप्त गर्दछ, हामी सुझाव दिन्छौं Vocre. केही फाइदाहरूमा उच्चारण सहायता र उच्च-गुणवत्ता ध्वनी समावेश छ. यो मध्ये एक हो अन्तिम मिनेट यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग.